‘अनलाईन हुँदैमा सेयर बजार झ्याप्पै माथी उठ्छ भन्ने हुँदैन’ - Bizkhabar Online
बिजखबर संवाददाता २०७५ मंसिर २३ (December 9, 2018) मा प्रकाशित
राजनीतिक स्थायीत्व, दुई तिहाई बहुमतको सरकार र लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको अनलाईन कारोबार संचालनमा आएसँगै बजार उच्च रुपमा बढ्ने आशामा बसेका लगानीकर्ता निराश बन्न पुगेका छन् । स्थायी सरकार र अनलाईन कारोबार संचालनमा आएपनि बजार लगातार ओरालो लागेको छ । १८ सय अंकभन्दा माथी पुगेको सेयर बजार लगातार घटेर ११ सय विन्दुमा झरेको छ । जसका कारण कतिपय लगानीकर्ता आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य भएका छन् भने कतिपयको घरबार नै विचल्लीमा परेको छ । लगातार ओरालो लागेको बजारमा सुधारका लागि सरकार विशेषगरी अर्थमन्त्रीले चासो नदेएको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै लगानीकर्ताले अनसन बस्ने सम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले भर्खरै ल्याएको अनलाईन कारोबार, यसको अवस्था र नेपालको बर्तमान सेयर बजारको वास्तविकताको विषयमा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार :
म यो क्षेत्रमा आएको एक बर्ष भयो । भेन्डर कम्पनीलाई ७ करोड रुपैयाँ म आउनुभन्दा पहिलै तिरिसकिएको थियो । अहिले उसले पाउने रकम पनि हामीले रोकिराखेका छौं । अहिलेसम्म बुझाइएको रकम पनि बैंक ग्यारेन्टी पछि मात्र तिर्ने हो । हाम्रो देशमा स्वतन्त्रता धेरै भएकाले जसले जे भनेपनि हुने भएकाले यसलाई कर्मकाण्डी भनेर आरोप लगाइएको हो । कसैले यस्तो समस्या आयो भनेर कम्प्लेन गरेमा त्यसलाई आत्मसात गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । विभिन्न सोसल मिडियामा आएका कुरा कसरी हामी कसले भन्यो भनेर ठम्याउन सक्छौ ?
अनलाईन ट्रेडिङ पश्चात नेप्से लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार बढेन उल्टै घट्यो भन्ने बहस पनि हुन थालेकोे छ । यसमा केही कारण देख्नुहुन्छ ?
अनलाईन र मार्केटको इन्डेक्सको कुरा ठ्याक्कै मिल्दैन । अनलाईन आएर मार्केट एकैचोटी झ्याप्पै माथी उठ्छ भन्ने छैन । अनलाईन र मार्केटको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । लगानीकर्ता उनै हुन, सिस्टम विकास भएको मात्रै हो । अहिले बजार विस्तारै बढी राखेको पनि छ । अहिलेको मार्केट तरलता अभाव तथा ब्याजदरको वृद्धिका कारणले पछी परेकै हो । अब मार्केट विस्तारै माथि बढ्दै पारदर्शी हुनेछ । अब नेप्सेको ईन्डेक्समा धेरै ठुलो ग्याप भने हुँदैन । यसमा अनलाईन सिस्टम आएपछि पारदर्शिता आउने अनुमान छ । बजारमा पहिले रहेका विभिन्न किसिमका आक्षेपहरु हटाउनमा यसल मद्यत पुर्याउँछ । देशका सबैजसो स्थानीय तहमा यसको सेवा पुग्नेछ । बजारमा डिमान्ड र सप्लाईले मार्केटमा मूल्य समायोजन हुन्छ । हामी हाम्रो तर्फबाट मार्केटमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नका लागि कामहरु थाल्छौँ । जसको एउटा उदाहरण अनलाईन पनि हो । यो सँगै हामी अन्य कामहरु पनि अघि बढाउँछौं । तर हल्लाको भरमा अनलाईन आएपछि मार्केट बढ्छ भन्ने कुराको पछि कसैले लाग्नु हुँदैन । त्यसैले राम्रोसँग बुभेर मात्रै लगानी गर्न सम्पुर्ण लगानीकर्तालाई आग्रह गर्छु ।
अहिले हामीले ल्याएको सिस्टम पनि फुलफेजकै हो । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो । यसको विषयमा होमवर्क र नितिनिर्माण गर्न पर्ने कुराहरु हुँदैछ । यो नितिगत कुरा हो । अनलाइन भनेको छुट्टै सिस्टम हो ।
यसमा पहल गर्नुपर्ने हाम्रो काम हो। ति कामहरु तथा छलफल पनि भएका छन । विदेशी लगानीकर्ता आएर पनि अनलाइन आएको जस्तो भन्ने होइन यसले पनि मार्केट बढ्दैन । विदेशमा बस्ने मान्छे पूँजीबजारका बारेमा धेरै कुरा जानेको हुन्छ । भोली लगानीकर्तालाई आइपर्ने समस्याको बारेमा पनि हामिले चनाखो हुनुपर्छ । यस विषयमा केही कामहरु अगाडी बढेका छन् । अनलाईनसँग एनआरएन जोडिदैन । हामीले दोस्रो बजारमा प्लेटफर्म दिने हो संसारका कुनै पनि कुनामा बसेर पनि अहिलेको सिस्टमले कारोबार गर्न पाईन्छ ।
बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया चाही कहाँ पुग्यो ?
हालसम्म लाईसेन्स पाउँ भनेर कुनै पनि बैंकहरु हामीकहाँ आईपुगेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसका लागि एउटा सब्सीडरी कम्पनी खोल्नुपर्ने निति रहेकोले त्यहाँबाट स्विकृती लिएर हामीकहाँ आए भने हामी लाईसेन्स दिन्छौं । राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर नै हामीले बैंकलाई पनि ब्रोकर लाईसेन्स दिने निर्णय गरेका थियौँ ।
यसका लागि कुनै बैंकले राष्ट्र बैंकको स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो तर यो स्विकृति हामिले नै दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेकोले केहि समय लागेको हो । यसको निर्णय सेबोनमा रहेको अवस्था छ । सायद राष्ट्र बैंकमा सेबोनले कुरा राखेको होला त्यहाँबाट आएपछि यसको कार्यान्वयनमा टुङ्गो लाग्नेछ ।
ब्रोकरलाई धेरै ठाउँमा शाखा खोल्न दिइएको छ । अहिलेसम्मको प्रगती के छ ?
रिमोट वर्क स्टेशन (आरडब्लुएस) को मूख्य ब्रोकरबाट नियन्त्रण नभएकाले फरकजस्तो भएको थियो । बीचैमा हामी र सेबोनले छलफल गर्दा शाखाको रुपमा स्थापना गर्ने कुरा भईरहेको थियो । तर शाखाको रुपमा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र थिएन । पुरानो सिस्टममा यसलाई शाखाको रुपमा विकास गर्ने निति थिएन अब उहाँहरुले शाखाकै रुपमा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ होला तर काठमाडौं बाहिर बुटवल, नारायणगढ, विराटनगर तथा चितवनमा यस्ता शाखाहरुले धेरै राम्रो काम गरेको देखिन्छ । आरडब्लुएस नयाँ अनलाईन आएपछि शाखाकै रुपमा विकास भएको छ ।
ब्रोकरको पूँजी बढाउने सन्दर्भमा नि ?
हाल सबै ब्रोकर कम्पनीहरुले आफ्नो पूँजी २ करोड रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन । तर मार्जिन लेन्डीङको कारोबार गर्नेभए ५ करोड पुर्याउनुपर्ने निर्णय भने लागु गरिएको छैन । कुनै पनि बैंकले मार्जिन लेन्डीङको कारोबार नगरेकाले उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नभएको हो ।
ईन्साइडर इन्फर्मेसनबाट सेयर कारोबार हुने व्यापक हल्ला सुनिन्छ । यसलाई नेप्सेले कसरी नियमन गरेको छ ? यसको वास्तविकता के हो ?
संसारमा ईन्साइडर ट्रेडिङको नियन्त्रण गर्न निकै कठिन विषय हो । हाम्रो देशमा यसको कुनै नियम पनि छैन र यसको ड्राफ्ट पनि सेबोनले तयार पार्दै छ । हामीले जानकारी पाएअनुसार यसको निरिक्षण गर्ने काम गरिरहेकै छौं । कतिपय ठाउँमा हालसम्म त्यस्तो भेटिएको त छैन तर सुन्नमा आउँछ । कुनै पनि चिज हल्लाको भरमा मात्रै गर्न नसकिने हुनाले हामी त्यसको पछि लाग्न हुँदैन ।
कुनै कम्पनीले बोनस सेयर लगायतका सेवा तथा सुविधा दिने बेलामा १५/२० दिन अगाडी नै बजारमा हल्ला फैलदा यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा परिरहेको छ । फेरी केही दिनपछि नै कम्पनीले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरिरहेका भेटिन्छन् । यस्तो खालको ट्रेडिङमा नेप्सेको नियमन कम भएको हो ?
रिपोर्टमा सबैको एकरुपता देखिदैंन । यसमा नेप्सेको ध्यान किन नपुगेको ?
बैंक वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैैंकको गाईडलाईनअनुसार ब्यालेन्स सिट बनाउने हो । बीमा कम्पनीहरु बीमा समितिको गाइडलाईनअनुसार बनाउँछन । हरेक संघसंस्थाको नियमन निकाय फरकफरक हुने हुनाले त्यो फम्र्याट अनुसारे ब्यालेन्स सिट बनाउने गर्छन । तर अनलाईनमा भने डाटाहरु राख्ने प्रक्रिया भर्खर सुरु भएको हो । हामीले सबैलाई युजरनेम र पासवर्ड दिएका छौं त्यो अनुसार कसैको मिस्टेक भएमा तुरुन्तका तुरुन्तै सच्याउने गरेका छौं । कहिलेकाही मिस्टेक भएका डाटाहरु पनि हामीले करेक्सन गर्छौं ।
कुनै कम्पनीले आफ्नो डाटाहरु अनलाईनमा हालिसकेपछि त्यो डाटाहरु सही छ भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म उक्त कम्पनीको म्यानुअल आउँदैन तबसम्म हामीलाई उपलब्ध गराएको डाटा सही हो या गलत थाहा हुँदैन । त्यसैले डाटा कस्को केहो भन्ने कुरा कम्पनीलाई नै जिम्मा दिएका छौं । उनीहरुले सबै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसमा फरक परेपछी मात्रै बल्ल हामीले सतर्क गराउँछौं । पछिल्ला दिनमा यस्तो कार्य धेरै कम भएको छ ।
नेप्से धेरै घट्यो भनेर लगानीकर्ताहरु नेप्सेमाथी आक्रोस पोखिरहन्छन् । यसका बाबजुद अब नेप्सेलाई अगाडी बढाउन तपाईहरुले के के गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?
बजार घटबढ हुनुमा डिमाण्ड र सप्लाइ को कुरा त छदैछ तर बैंकको बयाजदर, बजारमा तरलताको अभाव, लगानीका विकल्पहरु लगायतका कुराले पनि असर पार्छ । अब लगानीका विकल्पहरु धेरै आएकाले अब मार्केट विस्तारै माथी उठ्छ । तर पहिलेको जस्तो एकैचोटी ह्वात्तै तल झर्ने र माथि उक्लिने प्रवृत्ति भने मार्केटमा देखापर्ने छैन । यसमा नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीहरुको प्रस्तुतिमा पनि मार्केट भर पर्नेछ । नेपालको पूँजीबजारको भविष्य सुनौलो छ । पूँजीबजार भएकाले आजको भोली भने हुँदैन यसका लागि केहि धैर्य आवश्यक भने पर्छ ।
बजारमा सेयर लगानीकर्ताका लागि धेरै संस्थाहरु खुलेका छन । नेप्सेमा अलिकति तलमाथी भएमा नेप्सेमाथि आक्रोस पोख्छन । यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस्ता संस्थाहरु आफ्नै फाइदाका लागि खोलिएका छन् । लगानीकर्ताका हकहितका लागि हो भने एउटै संस्था काफी हुने देखिन्छ । हालसम्म नेप्सेमा वैधानिक रुपमा रहेका जम्मा ३ ओटामात्रै संस्था छन । बाँकी भर्खर खुलेका छन । सबै मिलेर जाँदा राम्रै हुन्छ तर यसरी अलगअलग हुँदा दुर्भाग्य हो जस्तो लाग्छ ।